Buy Car Wash Pump (39,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
✔️ ခြံထဲက ပန်းပင်တွေ ရေဖျန်းဖို့အတွက်
မော်တာတွေ ပန့်တွေ ရေပိုက်တွေ ရေဖျန်းခေါင်းတွေ တကူးတက သွားဝယ်စရာ မလိုတော့ပါ။ ဒီပန့်လေး တစ်လုံး ဝယ်ထားရုံနဲ့ အားလုံး ပြည့်စုံစွာ ရရှိပါပြီ။
?ℹ️လိုအပ်တဲ့အခါ ကားပေါ်မှာပါတဲ့ စီးကရက်လိုက်တာ အပေါက်မှာ တပ်ပြီး အသင့်သုံးရုံပါပဲ။ (DC12V သုံးရတာကြောင့် လျှပ်စစ်မီးပျက်နေလဲ အေးဆေးပါ။)
? ရေခွက်နဲ့ ပက်ဆေးသလို ရေအများကြီး မကုန်ပဲ ၅လီတာ (သောက်ရေသန့်ဘူးကြီး) လောက် ဆိုရင် ဆလွန်းကားတစ်စီးကို ပြောင်လက်နေအောင် ဆေးလို့ရပါတယ်။
ဘူးပါကင်အတွင်း ပါရှိသော ပစ္စည်းများ
⏩ ၈မီတာအရှည် ရေဖျန်းပိုက်
⏩ ရေမှုန် (သို့) ရေအစူး ဖျန်းနိုင်သော ခေါင်း
⏩ စီးကရက်လိုက်တာပေါက်နှင့် စက် ချိတ်ဆက်ရန် ၂မီတာကြိုး တို့ ပါရှိပါတယ်။
️♻️ ကားရေဆေးရန် ~~~~
အသင့်ပါလာသော ပိုက်ကို စက်ရဲ့ ပိုက်ခေါင်းမှာ စွပ်ပါ။ ရေဖျန်းခေါင်းကိုလည်း ပိုက်ရဲ့ အခြားတဖက်မှာ စွပ်ပါ။ အသင့် စွပ်နိုင်သော ဆော့ကပ်များနှင့် ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ဖြုတ်ရ၊ တပ်ရ လွယ်ကူပါတယ်။
စက်ကို ရေပုံးထဲ ထည့်၍ စက်နှင့် ကားစီးကရက်ပေါက်ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ရေဖျန်းပိုက်ဖြင့် ဆေးကြောနိုင်ပါပြီ။ ရေမြှုပ်ပန့် ဖြစ်တာကြောင့် မော်တာထဲ ရေဝင်ပြီး လောင်တာ၊ ပျက်တာမျိုး မရှိပါ။
ရေဖျန်းခေါင်းမှ ဘားကို ညှစ်မှသာ ရေတွန်းထွက်ပြီး ဘားပိတ်ထားလျှင် မော်တာ အလိုလိုရပ်သဖြင့် မော်တာလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ပန့် အဖွင့်၊အပိတ်ခလုတ် သီးသန့်မပါပဲ ရေဖျန်းခေါင်းမှ ဘားသည်ပင် ဖွင့်/ပိတ် ဖြစ်ပါတယ်။
?? ပန်းပင်ရေဖျန်းရန်၊ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းရန် ရေအမှုန်အမွှားအဖြစ်၎င်း၊ အားပြင်းသည့် ရေပန်းအဖြစ်၎င်း ရေဖျန်းခေါင်းကို လိုသလို ချိန်လှည့်နိုင်ပါသည်။ ဘတ္ထရီအားအပြည့်ရှိလျှင် ခေါင်းမှ ပေ၂၀အဝေးထိ ရေဖျန်းနိုင်ပါသည်။
⚡ ကားရေဆေးနိုင်ရုံသာမက ခြံထဲ အပင်ရေဖျန်းဖို့၊ ခြံသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ ၊ ခွေးလေးတွေကို ရေချိုးပေးဖို့ကိုလည်း လျှပ်စစ်မီးမလိုပဲ ကားပါဝါအားဖြင့်ပင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
? ဆက်သွယ်မှာယူပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်း Door to Door အိမ်အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေး ပါသည်။
? ဆိုင်မှာ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှု စမ်းသပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှ ဝယ်ယူလည်း ရပါသည်။
? Rocket Online Shopping
အမှတ် ၁၃၂၊ ၄လွှာB၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို.နယ်။
? အကယ်၍ ယခုအချိန် မလိုအပ်သေးလို့ စိတ်မ၀င်စားပါကလည်း နောက်တစ်ချိန် လိုအပ်လာသည့် အခါတွင် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ရန်၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ လိုအပ်သည့်အခါ လမ်းညွှန် နိုင်ရန် မိမိ၏ wall တွင် post ကို share ခြင်းဖြင့် သိမ်းဆည်း ထားနိုင်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း – 39,000 kyats
အိမ်မီးနဲ. သုံးရန် – Adaptor – 17000 kyats
နှစ်ခုစလုံး ယူပါက 49000 kyats
အမည်: Car Wash Pump